ba - Synonyms of ba | Antonyms of ba | Definition of ba | Example of ba | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for ba
Top 30 analogous words or synonyms for ba
လုပ်သားများကောလိပ် ကောလိပ်တွင် ဘွဲ့ကြိုဒီဂရီအစီအစဉ်များကို သင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရများ (BA)၊ သိပ္ပံဘွဲ့ရများ (BSc)၊ ဥပဒေဘွဲ့ရများ (LLB) များကို ရည်ရွယ်ကာ သင်ကြားပေးလျက် ရှိသည်။
ကေအမ်ဒီ 11-1, Ba Yint Naung Road, Aung Thit Sar Qtr., Kalay.
ဇဝန၊ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ (သာသနာ့ဂုဏ်ရည်) ဆရာတာ်၏ ထူးခြားချက်မှာ ရဟန်းဘောင် ဝင်ရောက်ပြီးမှ အစိုးရ မူလတန်းကျောင်း စာအုပ်ကို သင်ယူပြီး ဥပဒေဘွဲ့ (BA, BL) ရသည်အထိ တက္ကသိုလ်ပညာကို ရယူခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။
အူဇီ မြန်မာနိုင်ငံတွင် IMI၏ တရားဝင် လိုင်စင် ရယူကာ ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်း စက်ရုံများ၌ BA 94 စက်ကလေးအမည်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်။ အူဇီအား အထူးတပ်ဖွဲ့များ အစောင့်တပ်များ နှင့်ကိုယ်ရံတော်တပ်များ တွင်သာ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ် မြန်မာ့ တက္ကသိုလ်ပညာရေးစနစ်တွင် ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံတက္ကသိုလ်များအား အတူတကွ ပေါင်းစည်းထားခဲ့ပြီး မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်သည် ရိုးရိုးဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်များနှင့် သိပ္ပံဘာသာ အထူးပြု ကျောင်းသားများအား ဝိဇ္ဇာဘွဲ့များနှင့် မဟာဘွဲ့များကို ချီးမြှင့်ပေးသည်။ ၎င်းသည် ရိုးရိုး Bachelor Of Art(BA) ဝိဇ္ဇာဘွဲနှင့် Bachelor Of Science(BSc) သိပ္ပံဘွဲ့ ရယူနိုင်ရန်အတွက် သုံးနှစ် အချိန်ပေးရပြီး BA(Hons) နှင့် BSc(Hons) တို့ကဲ့သို့သော ဂုဏ်ထူးတန်း(Honor Degree)များအတွက်ကိုမူ ၄ နှစ်အချိန်ပေးရလေသည်။ ဥပဒေပညာအတွက်ကိုလည်း ၄ နှစ် အချိန်ပေးရသည်။
ဘေရီယမ် စက်ရုံများတွင် အချို့သောဘေရီယမ် ဒြပ်ပေါင်းများသည် ရေထဲ၌ လွယ်ကူစွာပျော်ဝင်ပြီး၊ ကန်များ၊ ချောင်းများ၊ မြစ်များတွင်လည်း တွေ့နိုင်သည်။ ထိုသို့တွေ့ရသောပျော်ရည်များကြောင့် ဗေရီယမ်ဒြပ်ပေါင်းများသည် ဝေးကွာသော နေရာများထိ ပြန့်နှံ့နိုင်သည်။ ငါးနှင့် အခြားရေအောက်သတ္တဝါများသည် ဘေရီယမ်ဓါတ်ပေါင်းများကို အလွယ်တကူစုပ်ယူမိသောအခါ၊ ဘေရီယမ်(Ba)သည် ထိုသတ္တဝါတို့၏ ကိုယ်ခန္ဒာထဲတွင် စုပုံနေလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကာဗွန်နိတ် နှင့် ဆာလဖိတ် ကဲ့သို့ မပျော်ဝင်နိုင်သော ဆားအဖြစ်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အစိတ်အပိုင်းအများစုတွင် တည်ရှိနိုင်သည်။ ဘေရီယမ်ဓါတ်ပေါင်းများသည် ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင်တွင် သို့မဟုတ် ရေအနည်အနှစ်များပါဝင်သော မြေဆီလွှာတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ခိုင်မာစွာ ကျန်ရှိနေသည်။ ကုန်းတွင်းပိုင်း ကျသော ဒေသများတွင် ဘေရီယမ်(Ba) ပါဝင်မှု ပမာဏ အနည်းဆုံးကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထိုပမာဏသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စုပုံသော နေရာရှိ ဘေရီယမ် ပါဝင်မှုထက် ပိုများပေသည်။
သာဖြူ၊ ကို Biography Mason, Francis, Ko Tha Byu, the first Karen Christian (1983). Ya Ba Toh Loh, Memoir of Saw Ko Tha Byu (In Karen) (1950)
ဘဟားမားနိုင်ငံ ဘဟားမားစ်ဟုသောဝေါဟာရ မည်သို့ဖြစ်လာသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရပေ။ စပိန်စကားဖြစ်သော ဘဂျားမား "baja mar" ("shallow seas")မှ ဆင်းသက်လာသောစကားလည်း ဖြစ်နိုင်သလို၊ ဒေသခံ လူကေယန်ဘာသာစကားဖြစ်သော ဘ-ဟ-မား "ba-ha-ma" ("large upper middle land") မှ ဆင်းသက်လာသည်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဒေးဗစ် သွန်မ်ဆင် ဒေဗစ်သွန်မ်ဆင် သည် ၂၀၀၂ ကတည်းက သွန်မ်ဆင်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး ရိုက်တာကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးနောက် သူသည် သွန်မ်ဆင်ရိုက်တာဟုခေါ်သောခွဲထွက်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပါသည်။ လက်ရှိ ကနေဒါနိုင်ငံ၊ အွန်တရီရို ပြည်နယ်ရှိ တိုရွန်တိုမြို့တွင်နေထိုင်သည်။ သွန်မဆင်သည် ကနေဒါရှိ Upper Canada College တွင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ကန်းဗရစ်ချ် တက္ကသိုလ် ရှိ Selwyn ကောလိပ်မှ သမိုင်းဘာသာရပ်ဖြင့် BA ဘွဲ့(နောက်ပိုင်းတွင် MA ဘွဲ့အထိ တိုးမြှင့်ပေးခဲ့) ရရှိ ခဲ့သည်။